यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवातः क’माउनु हुनेछ सो’चेभन्दा बढी धन…. – Butwal 24 News
August 28, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on यी बार गर्नुहोस् नयाँ कामको सुरुवातः क’माउनु हुनेछ सो’चेभन्दा बढी धन….
व्यक्तिको जीवनमा जन्म बार र राशी ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिको जन्म बार हेरेर नै व्यक्तिको कुण्डली नि’र्माण गर्ने गरिन्छ । जन्मेको बार र राशीले नै ब्यक्तिको भ’विष्य बारे बताउने गर्छन् ।
ज्योतिष शा’स्त्र अनुसार जो कसैले व्यापार व्य’वसाय र नोकरी गर्नको लागि पनि आफु जन्मेको बारमा कुन दिन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने ज’नविश्वास रहेको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईलाई सात बार मध्ये कुन दिन के कामको सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारे जा’नकारी दिन गइरहेका छौँ ।
१ आईतबारः आइतबारको दिन गीत ,बाद्य वादन, राजसेवा, गाइगोरु, कि न बे च गर्ने, हवन गर्ने मन्त्र उपदेश लिने, औषधी नि’र्माण गर्ने, शास्त्र , सुन, तामा, उनी, बस्त्र जस्ता सामाग्रीको किनबेच गर्ने, रातो वस्तुको कारोबार गर्ने जस्ता कार्य गर्नु धेरै शुभ रहनेछ ।
५ बिहिबारः यो दिन धार्मीक कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो दिन मन्दिर नि’र्माण, मन्त्र जप, नवग्रह पुजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
६ शुक्रबारः यस दिन गायण, मणी, रत्न, हिरा, सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अ’लंकार, बाणिज्य, व्यापार, गाई वस्तु मिनबेच गर्नु, द्र’व्य भण्डारण गर्नु धन सञ्चय गर्नु, कृषि कार्य सुरुवात गर्नु शुभ मानिन्छ ।
७ शनिबारः शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्र’भाव पर्ने धा’र्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झु’टो बोल्नु , ठगि गर्नु , क’प’ट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उ’द्घाटन, फ’ला’म आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ ।